Uma ngempela kudingeka isizathu ukwandisa degree of ugqozi egunjini lokulala, sikunikeza eziningana ezinhle salokhu. Ngokusho isayensi, ubulili kunemithelela eminingi emihle, hhayi kuphela lapho kuzalwa izingane kanye nenjabulo. Ikakhulukazi, injabulo elisondelene kokuba nomthelela omuhle empilweni. Sizobe ukukhuluma okuningi mayelana naleyo.
1. Ukusondelana burns kilojoule
Uma udinga isizathu esihle ashise isisindo okweqile, wena baye bakuthola. Ukuvivinya umzimba olutholwa umzimba ngesikhathi socansi, ezifana nemfundo ejimini. Budebuduze phakathi kwesibambisene nabo kuqinisa imisipha ithoni, kwandisa izinga inhliziyo, ngcono umsebenzi jikelele zomzimba. Ngo-2013, ucwaningo ezithakazelisayo lwenziwe. Abahlanganyeli egqoka izinzwa athwebula nemisebenzi yabo. Ngokwesilinganiso, ubuhlobo bobulili ehlala nge okwandulela imizuzu 25, ukusiza ukuba ashise amadoda angaba ngu-100 futhi abesifazane - okunama-kilojoule angu-70.
2. Kuyasiza ubuthongo
Ngemva orgasm umzimba ukhiqiza prolactin, i-hormone obhekene aziphumulele. Kuleso simo, uma umuntu enomuzwa ukhathele, ubulili kusiza ubuthongo ekuseni.
3. Ukwenza uthando ukunciphisa blood pressure kanye ukucindezeleka amazinga
Ngo-2005, ukuhlola elandelayo kwenziwa eScotland. Izisebenzi zokuzithandela bacelwe ukuthi ukurekhoda imisebenzi yabo ngokobulili amasonto amabili, ngayinye abahlanganyeli ke kwadingeka ukuba ukuxazulula imisebenzi ethile eyenga. Inkulumo nezilaleli noma isixazululo zomphakathi lwezinqubo zezibalo ngokuvamile kukhona sokuboshwa amazinga zicindezeleke. Amalungu, umsebenzi wayo njalo ngokocansi ngesikhathi sikhathi esibucayi kangcono umsebenzi: esimweni esicindezelayo bathola aphansi blood pressure kuzuba. Ososayensi bakholelwa ukuthi ucansi njalo isiza ukugcina uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi e kuyinsakavukela.
4. kuqinisa inhliziyo
ubulili avamile bangazuza inhliziyo futhi ngokuhamba kwesikhathi. ososayensi baseBrithani baye bathola ukuthi elandelayo. Sexual hlangana kabili ngesonto iminyaka engamashumi amabili iyehlisa ingozi yokumelwa yinhliziyo ezingabantu. Uma umuntu ukusondelana kanye kuphela ngenyanga, eminyakeni eyishumi kwandisa ingozi ngokufa okuzumayo ngaye ezingaphezu kwesigamu. Ososayensi baye exhumene ukusetshenziswa umsebenzi wocansi ngisho ne isizukulwane ezengeziwe estrogen ne-testosterone hormone. Futhi hormone kwabesifazane nabesilisa nomphumela ozuzisayo kuwo wonke amasistimu umzimba, kuhlanganise zenhliziyo.
5. Sex kungavimbela emdlavuzeni
Abesilisa bephila ukuphila ubulili enempilo, basengozini amancane kakhulu okuba nomdlavuza wendlala. Ngo abesifazane, ucansi njalo kuvimba intuthuko webele izimila.
6. Ithuthukisa izivikeli mzimba
Sexual hlangana njalo masonto onke kuvusa izivikeli mzimba futhi zivikela imikhuhlane. Kokunye sokuhlola, abacwaningi wacela abafundi ukuqedela imibuzo mayelana nezocansi njalo. Khona-ke, abahlanganyeli uhlaziyo ngamathe ukuhlola amazinga omzimba (immunoglobulin, ayisiza). La mangqamuzana bhekana amagciwane. Kwatholakala ukuthi omzimba amazinga e abafundi ucansi njalo, ngokwesilinganiso, ingxenye eyodwa ephakeme.
7. aqede ubuhlungu
Ngokuphambene ngemibono adumile, ikhanda kungaba isithiyo ocansini. Cha, kwenzeka okuphambene. ososayensi German wathola ukuthi ukusondelana aqede ikhanda e abesifazane futhi kusiza ukunciphisa izimpawu migraine. Orgasm kuyasiza usabalalise ukugeleza kwegazi emzimbeni. Endorphins, savela ngemva kocansi, ingaba njengesihluthulelo uhlobo imithi ebulala izinzwa.
8. Sex bandisa nokuphila
ukuphila ubulili Ukuthela ngempela kuholele kade. Ucwaningo olwenziwa yinkampani amalungu e-Duke University, esehlanganise isikhathi phakathi 1955 no-1980. Amadoda abe ukusondela elivamile, babephakathi esigabeni yalabo abanhliziyo bokuphila kwabantu sasiyiminyaka ephakeme. Ukuze abesifazane, ubuhlobo bobulili nhlobo iyona umbandela esiyinhloko kade.
9. Ukusondelana kuqinisa ubuhlobo
Oxytocin kungenye ihomoni okuthiwa uthando. Phakathi ngokomzimba ukusondela izidakamizwa ekhululwa khona futhi kwandisa ukuthandana phakathi kwesibambisene nabo. Yokuqinisa ubuhlobo, ngemva kokuya ocansini kudingekile ngizigone futhi ubonise ngesisa esikhulu. Gona, angiqabule, bangana futhi amazwi enhle emva kocansi ukwandisa izinga lokwaneliseka ubuhlobo bebonke.
10. Lona senjabulo
Ukusondelana ngokomzimba akusona njalo eyamukelekayo, ikakhulukazi uma abantu ngilugcinile ukugula okungalapheki noma i ukuguga. Kulokhu, ososayensi ukuncoma imibhangqwana ukuthola isikhathi ocansini okungenani kanye ngenyanga. Lapho esegugile, umsebenzi wocansi akuholeli umlingani orgasm, kodwa kusenzima injabulo.
11. Ubulili kwenza abantu ngobuchule
Ucwaningo olwenziwa yinkampani kwezisebenzi Princeton University, sasiqhutshwa emagundaneni. Nokho, imiphumela yayo zisebenza ngokugcwele abantu. Ngo namagundane, kwadingeka ucansi njalo ngaphezulu, kube khona ukwanda izinzwa hippocampus zobuchopho. Lo mnyango unesibopho ukufunda nenkumbulo.
12. Abantu bheka omncane
Ososayensi bathole ukuthi abesifazane abaneminyaka engu-40 kuya ku-50 aya ocansini okungenani izikhathi ezintathu ngesonto, bheka ezingaphansi kuka umngane wabo kancane-onothando, iminyaka 4-7. Endorphins zikhishwa ngokusebenzisa ocansini, ngcono ikhwalithi ubuthongo futhi zibe nomphumela ezuzisayo phezu ukubonakala isikhumba.
13. It kwandisa libido
Kuyindida ucansi njalo kungenza abalingani ezinganeliseki. I ubulili ekuphileni kwabo babe, bafuna. Kuleso simo, uma abalingani babe asibi, ukusondelana uyakwazi athokozise.
Uyaxebuka ebusweni ekhaya. Izinhlobo uyaxebuka.
Izidakamizwa ezingezona isifo esivimba ukuvuvukala. Imfundo ye "Nurofen"
American ifilimu umlingisi Dzhastin Barta
City Cheboksary. Russian Drama Theatre